Nhau - Ungatenge sei mvuracolor artiest pendi mabrashi evatangi?
Vatangi vanotenga sei mvuracolor Artist kupenda mabhurashi? Aya anotevera mamwe ma parameter akakosha andakanyora muchidimbu pakutenga mabhurasho aya.
Kutanga, chimiro chebrashi
Kazhinji, brashi rinotenderera rinonyanya kushandiswa. Mazhinji acho anogona kuve akapatsanurwa, saka ini handizo pinda mune zvakadzama pano. Muchokwadi, ndinofunga kuti peni-bhora-peni rinonyanya zvichienderana nepeni dumbu kuti rione kuchengetedza kwemvura, uye chimiro cheiyo nib chinotarisa muromo wepeni.
Inotevera ibhurashi-rakapetana-tip bhurasho, iro rinotambanudza kunze uye rine mutsara webhurashi. Iwe unogona kutenga maviri-akapamhama-tip bhurasho, imwe diki uye imwe hombe nhamba yakaparadzaniswa nemamwe mashoma, ayo anogona kushandiswa kugadzira nzvimbo yekupenda. Mutsara bhurasho rinoshandiswa kuparadzira mvura (yekumhanyisa mapepa kana kunyorova kupenda). Kazhinji, iwe unogona kusarudza 30mm yakafara kana yakati rebei fomati ye16K.
Kune mamwewo mamwe maumbirwo, senge fan fan, katsi rurimi chimiro, blade chimiro, nezvimwe, izvo zvisina kushandiswa zvakanyanya, uye kazhinji hazvidi kutenga.
Chechipiri, kukura kwebrashi (kureba uye upamhi)
Yetatu, saizi chinhu icho munhu wese anogona kufunga nezvacho. Sokungofanana kwandakatenga dzakateedzana mapeni enylon kubva pa0 kusvika pa14 yeSakura pakutanga, pane ese makuru uye madiki. Mushure mekudhirowa kwechinguva, iwe uchaona kuti pane chete maviri mapeni iwe aunoshandisa kazhinji.
Zvitore semuenzaniso. Ini ndinowanzo penda mu 16K fomati uye pano neapo 32K. Saka kana iri bhurasho rekuMadokero, rinowanzove Nha. 6 uye Nha. Kune brashi renyika, Xiuyi iri 4mm yakafara uye 17mm kureba, uye inogona zvakare kuve yakagadzirirwa ne5mm peni senge Ye Chan, Ruoyin zvichingodaro.